काठमाडौं । जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम दुई टिमको टुंगो लागिसकेको छ । ती हुन्-न्युजिल्याण्ड र इग्ल्याण्ड ।न्युजिल्याण्डले भारतलाई हराउँदै फाइनल पुगेको हो भने इग्ल्याण्डले अस्ट्रेलियालाई पराजित गरी अन्तिम दुईमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो । तर, कोशौं टाढा...
गर्मीले पुरानो बसमा बनाइयो स्वीमिंग पुल
एक झुप्पो अंगुरको ७.५ लाख
३६६ असईको बढुवा सिफारिस (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ३६६ प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)को बढुवा सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको बढुवा समिति बैठकले जनपथ प्रहरी समूहका प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई सोही समूहतर्फको प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवा सिफारिस...
सल्यानका शाखा अधिकृतविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर
काठमाडौं । सल्यानका शाखा अधिकृतविरुद्ध काठमाडौंको विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुख (शाखा अधिकृत) धनबहादुर ओलीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप पत्र दायर गरेको हो । सूचना...
नियाग्रा फल्सको १८८ फीटबाट खसेको व्यक्ति जीवितै
काठमाडौं, एजेन्सी । क्यानडाको नियाग्रा फल्सको १८८ फीट उचाइबाट खसेका एक व्यक्ति सकुशल भेटिएका छन् । क्यानडा पुलिसका अनुसार, जुलाई ९ तारिखमा ४ बजे एकजना व्यक्ति नियाग्रा फल्सको एउटा रिटेनिञवालबाट फल्सको किनारामा खसेर बगेको भन्ने खबर आयो त्यसपछि उद्धार कार्यका...
काभ्रेमा घर पुरिँदा दुईको मृत्यु
काठमाडौं । काभ्रेमा पहिरोले घर पुरिँदा दुईको ज्यान गएको छ । यस्तै, दुई घाइते छन् । बिहीबारदेखि परेको लगातारको वर्षासँगै परेको पहिरोको कारण बनेपा नगरपालिका३, नाला, चुनातालकी ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र उनकी नातिनी ७ वर्षीया सोहनीको मृत्यु भएको प्रहरीले...
चीनको प्रभाव कम गर्न पाकिस्तानसँग नजिक हुने प्रयासमा अमेरिका
वासिंगटन । चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्न अमेरिकाले पुनः आफ्नो पुरानो सहयोगी पाकिस्तानसँग नजिक हुने प्रयास थालेको छ । अमेरिकाको एक शीर्ष जनरलको बयानबाट यस्तै संकेत मिलेको छ । संयुक्त चिफ अफ स्टाफका प्रमुखका रूपमा जनरल मार्क ए मिलेले भनेका...
‘विकास भर्सेज निकास’: हराएको र भत्किएको गाउँको वास्तविकता
काठमाडाैँ । एक चिकित्सकले विद्यार्थीलाई सोध्नुभयो, &#39;यो विद्यालयमा तपाईंहरु कति जना हुनुहुन्छ&#39;, &#39;हामी त तेल (तेह्र)जना मात्लै (मात्रै)हो&#39;, एक विद्यार्थीबाट सोझो जवाफ आउँछ । &#39;ओइ, ओइ त....रले (सरले)२०० जना भन भन्या हैन&#39;, बीचैमा अर्का विद्यार्थी फ्याट्ट बोल्छन् । चिकित्सकले विद्यालयको...
उपकुलपति आठ लाख घूस सहित नियन्त्रणमा !
सुनसरी। विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति प्रा. डा.राजकुमार रौनियार र प्रतिष्ठानका डा. रामहरि रौनियार आठ लाख घूस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्कामा कमिशनवापत सेवाग्राहीसँग घूस मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट...
काठमाडाैँका तीन रुटमा साझाका रात्रिकालीन बस सेवा शुरु
काठमाडाैँ । साँझ ६/७ बजेपछि सार्वजनिक सवारी नपाउने र पाए पनि भीडका कारण चढ्नै मुस्किल भइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा भने रात्रिबस सेवा शुरु भएको छ । साझा यातायात सहकारी संस्थाले काठमाडौँका मुख्य सडकमा नमूनाका रुपमा गत साताबाट राति ९ बजेबाट रात्रिबस...
काठमाडौँ । फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा आबद्ध कृषकलाई सहकारी बजार प्रणालीमार्फत आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)सँग समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा कृषकको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा...
कास्की । पाेखरा महानगरपालिकाले असिना पीडित कृषकहरुलाई राहत वितरण गरेको छ । २०७६ वैशाख १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म विभिन्न समयमा परेकोे असिना तथा हावाहुरीले कृषकको मकै, तरकारी तथा सुन्तला लगायतका फलफूलमा क्षति पुर्याएको थियो । महानगरका ३३ वडाका पीडित...
आयुष केसीलाई वासुदेव ‘मुनाल’ बालप्रतिभा पुरस्कार
काठमाडाै ।वासुदेव कोइराला मुनाल बालप्रतिभा पुस्कारबाट बाल गायक आयुष केसी सम्मानित भएका छन् । सानै उमेरमा गीतसङ्गीतका क्षेत्रमा योग्दान पुर्याएका केसी रु २१ हजारसहित सम्मानित भएका हुन् । गायक तथा सङ्गीतकार मुनालको ७०औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार...
नयाँ उपन्यास कृति ‘मृत्युको आयु’ बजारमा
काठमाडाैँ । जनस्वास्थ्यविज्ञ तथा लघुकथा विधाका हस्ताक्षर रवीन्द्र समीरको नयाँ उपन्यास कृति मृत्युको आयु बजारमा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलकमा पुगेका एक व्यक्तिको मृत्युपछि उनको आत्माको दृष्टिकोणबाट लेखिएको यो नवीनतम कृतिले वैदैशिक रोजगारीमा जानेहरुको कारूणिक कहरलाई काल्पनिक...
खेल हेर्दाहेर्दै क्रिकेट फ्यानको मृत्यु
काठमाडौं, एजेन्सी । यो वल्र्डकपमा लगातार राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको भारतीय टिम सेमिफाइनलमा भने न्युजिल्याण्डसँग १८ रनले पराजित भएको छ । हारपछि भारत वल्र्डकपबाट बाहिर भएको छ । मंगलवार भएको सेमिफाइनलमा पहिले ब्याटिञ गरेको न्युजिल्याण्डले २४० रनको लक्ष्य भारतसामु प्रस्तुत गरेको...
फोब्र्सको सूचीमा बलिउडबाट अक्षय कुमार मात्र
काठमाडौं, एजेन्सी । फोब्र्सले यस वर्षको संसारभरको कलाकारको कमाईको सूची सार्वजनिक गरेको छ । फोब्र्सले जारी गरेको सूचीमा यसपटक बलिउडबाट अक्षय कुमार एक्लो प्रतिनिधि भएका छन् । यस पटक सलमान खान पनि सूचीबाट बाहिर परेका छन् । फोब्र्सले जारी गरेको...
रात्रिकालीन आकाशमा झिलिमिली तारा हेर्न कसलाई पो मन पर्दैन होला । स्वच्छ आकाश भएको कुनै रात्रि आकाशमा तारा गन्ने प्रयास गर्नुस् । अन्दाजी कति वटासम्म गन्न भ्याउनुहुन्छ ? यससम्बन्धी विज्ञका अनुसार नग्न आँखाले हामीले बढीमा ३ हजारसम्म गन्न सक्छौं ।...